true targets /zu-ZA/tools-for-life/targets/steps/administrative-scale.html read 1 9 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/targets_zu_ZA.jpg Ama-Targets kukanye nemiGomo
Sonke sinamaphupho nemigomo, izinto esifuna ukuzenza noma esifuna ukuba nazo empilweni. Noma ngabe lemigomo mikhulu noma mincane, singayifinyelela uma siqondise futhi sihlela amacebo nezenzo zethu.
Umgomo awuzuzwa ngoba umuntu enqume ukuthi uzawuzuza. Isibonelo, umuntu obukele umdlalo we-basketball angahle acabange ukuthi kungaba kuhle ukuba ngumdlali we-basketball, kepha lokhu ngeke kuzenzakalele. Ukufinyelela kunoma yimuphi umgomo, umuntu kufanele athathe izinyathelo ezithile, njengokuzijwayeza ukwenza ikhono ngalinye elidingekayo kaninginingi noma ukusebenza ukuze angene eqenjini lesikole bese eya ukuyozilolonga kwi-basketball nsuku zonke. Lezi kanye nezenzo ezifanayo zizokwenza izinguquko ezidingekayo nentuthuko ukuze ekugcineni kufinyeleleke kumgomo.
Kungenzeka ukuthi usebenzela ukufinyelela kumgomo kodwa uthola ukuthi izinto ozenzayo azikusizi ukuthi usondele kuwo. Lokhu kungabangelwa ukuthi amacebo nezenzo akuhambelani ukuze ufinyelele kumgomo. Isibonelo, umuntu ofuna ukuba ngumdlali we-basketball uba nesikhathi esinzima sokuthuthukisa umdlalo wakhe. Uchithe isikhathi esiningi edlala i-basketball nabangani ngemuva kokuphuma kwesikole ngoba kumnandi, kepha akukho ukuzilolongela ikhono ngalinye elihlukile. Ngakho-ke leyo midlalo yangemva kokuphuma kwesikole ayihambelani nokufinyelela kumgomo.
Izifundo eziningana kufanele ziqondaniswe ukuze kuphumeleleke ekufinyeleleni kumgomo. Kwi-Scientology, lezi zihlelwe zaba yisikali. Kunoma yimuphi umgomo onawo, uthatha izinto ezikulesi sikali bese uthola ukuthi zizoba yini ukuze zihambisane nayo leyo nhloso. Ngemuva kwalokho ubuyekeza uphinde uhlele kabusha zonke izinto ngazinye uqondanise izinto ezisele nenhloso.
Ngokusebenzisa lesikali nazo zonke izinto eziqondanisiwe kuzoholela ekufezeni umgomo wakho.
Umgomo yinto umuntu afuna ukuyenza noma abe nayo, ngakho-ke uqondisa izenzo zakhe ukukufeza. Umgomo uvamise ukuthatha isikhathi eside.
Injongo umgomo omncane ngokubaluleka noma endaweni eyithathayo. Injongo isebenza emisebenzini ethile ngaphakathi komgomo ophelele.
Isibonelo, uma unomgomo wokuba ngumdlali we-basketball okhokhelwayo, izinjongo kungaba ngukuthola udumo nokuthola imali eningi.
Inqubomgomo iqukethe imithetho noma imihlahlandlela umuntu anquma kuyo. Izinqubomgomo zuwuhla olubanzi futhi azivamile ukuguquka.
Icebo liyindlela yokuthi ungakufeza kanjani okuthile. Liqukethe izenzo eziyisisekelo okufanele zenziwe ukuthuthukisa okuthile noma ukuxazulula inkinga. Icebo livame ukususelwa kwizinsizakusebenza ezikhona (imali, abasebenzi, imishini, izindawo, okuhlinzekelwayo, njll.) futhi kufaka nemibono ehlakaniphile yokuthi ungazisebenzisa kanjani.
uhlelo uchungechunge lwezinyathelo ngokulandelana ukuze zenze icebo.
Iphrojekthi uchungechunge lwezinyathelo ngokulandelana ukufeza isinyathelo esisodwa sohlelo.
Umyalo uyisiqondisi komunye umuntu ukwenza isinyathelo sohlelo noma sephrojekthi.
Indawo enhle kusho ukuthi ngabe isigcawu noma indawo kufanele kube yini. Kuyinto engafezeka. Noma imuphi umsebenzi unesigcawu esivele sikhona, okuyindlela into ethile eyiyona manje. Uma wena uqhathanisa isigcawu esihle nesigcawu esikhona, ungabona ukuthi yini okudingeka ishintshwe ukuze kusondezwe indawo eduze kwenhle.
Isibalo sokubonisa yinombolo noma inani ngokuqhathaniswa nenombolo yangaphambilini noma inani lezinto ezifanayo. Izibalo zokubonisa zikala ukukhiqizwa futhi zikhombisa ukuthi kwenziwa okungangani.
Ama-Valuable Final Products
I-valuable final product kuyinto engashintshaniswa neminye imisebenzi. Ukushintshana kusho ukunikela ngokuthile okubalulekile ngembuyiselo yokuthile okubalulekile. I-valuable final product ibalulekile ingashintshiswana ukuze kuxhaswe ngezinto ezinjengokudla, okokugqoka, imali noma ukubambisana.
Ukufeza impumelelo, zonke izinto ezikulesikali kumele zivumelane nazo zonke ezinye izinto ezisesilinganisweni sendaba efanayo.
Isibonelo, uma umuntu enenhloso yokwenza ngcono izimo emphakathini wakhe, angahle abe nohlelo lokuguqula indawo engenalutho (isiqephu sendawo esingasetshenziswa) ukuba yipaki lapho abantu emphakathini bangajabulela khona imidlalo ehlukahlukene.
Uhlelo oluhambisana nalokhu lungafaka nezinyathelo zokuthola ukuthi ungayithola kanjani imvume kwidolobha ukusebenzisa isiqephu sendawo esiseduze esingasetshenziswa. Ezinye izinyathelo kungaba ukukhuluma namaqembu esonto noma amakilabhu omphakathi mayelana nokuba nepaki ngokuthi bangabandakanyeka kanjani. Futhi ezinye izinyathelo zohlelo zingafaka ukuthola imishini yezemidlalo yalo belu ipaki.
Izibalo ezizothuthukisa ukukhiqizwa kwalokhu kungaba ngamanani amaqembu athintwayo kanye nenani lamaqembu avumayo ukusiza ekwakheni ipaki.
I-valuable final product ibalulekile kungaba yipaki elivulekile futhi elisetshenziswayo, elikhangayo futhi lapho abantu befuna ukuhlala noma ukuhamba noma ukwenza imisebenzi yezemidlalo. Lepaki iyinto engashintshaniswa nabantu abahlala kulo mphakathi. Futhi indawo enobungane, nobukhelwane obuphephile umphumela wokushintshaniswa kokubekwa kwepaki lapho.
Uma into esesikalini ingaqondaniswanga nezinye izinto, iphrojekthi izovinjelwa noma kungenzeka yehluleke. Kulesibonelo esingenhla, izibalo zezinombolo zezimoto ezihamba emigwaqweni ezungeze ipaki kungonakalisa uma kungaba ne-traffiki eningi lapho abantu behamba khona nezingane zidlala khona.
Ikhono lapho zonke lezi zinto kunoma yimuphi umsebenzi zihlanganiswa futhi zisebenza khona zibizwa ngokuthi “ukuphatha.” Futhi noma yimuphi umsebenzi ungathuthukiswa ngokuqondanisa izinto ezikulesikali ukuze zisebenzisane ukufeza umgomo.
Lesikali kanye nezingxenye zaso nokukwazi ukuzilinganisa kungenye yamathuluzi abaluleke kakhulu wokuhlela.